VPN: ၎င်းသည်အဘယ်နည်း။ ကျွန်ုပ်၏လိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။ | Linux မှ
တစ်ချိန်တည်းတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများသည်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်လိုချင်ကြသည် ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်နှင့်အတူသွားလာပါ «protección y privacidad»အိမ်မှဖြစ်စေ၊ အလုပ်ဖြစ်စေ၊ ဤသူတို့အဘို့အများသောအားဖြင့် ၏အသုံးပြုမှုကိုပါစေ «VPNs», ထက်ပိုဘာမျှမဖြစ်သည့် «Redes Virtuales Privadas»။ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့စာပိုဒ်ကိုရေးသားထားပါတယ် «Virtual Private Network» နှင့်အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ် «VPN».
တိကျစွာဘာကြောင့်လဲ «VPN» အများသုံးကွန်ရက်များအတွင်းလုံခြုံသောဆက်သွယ်မှုကိုဖန်တီးပေးသည်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါစေ «WiFi» အများပြည်သူသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဟိုတယ်၊ ရေကူးကန်သို့မဟုတ်စားသောက်ဆိုင်စသည့်အဆောက်အ ဦး တစ်ခုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏နေအိမ်သို့မဟုတ်အလုပ်ကဲ့သို့သောကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ «Conexión segura» ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data traffic ကိုသတ်မှတ်ထားသော server များမှတဆင့်ပျံ့နှံ့စေတယ် «cifrado» ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းမှုများကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်ဖုံးကွယ်ထားရန်နှင့်အတူတူပင်၏ «protección» ဝဘ်၏များစွာသောအန္တရာယ်များနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။
ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့ «VPNs» သူတို့ကများသောအားဖြင့်နည်းလမ်းများစွာအတွက်အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပေးကမ်း «protección y privacidad»ငါတို့အဘို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများအတွက်နှစ် ဦး စလုံးဒါပေမဲ့သူတို့ကငါတို့ကိုလည်းကူညီနိုင်ပါတယ် ဖြစ်နိုင်သမျှကျော်လွှား «restricciones o censuras» အချို့သောအင်တာနက်ပံ့ပိုးသူများသို့မဟုတ်အစိုးရများထံမှနှင့် ကျွန်တော်တို့ကိုလွယ်ကူချောမွေ့ «acceso» အမျိုးမျိုးသောအင်တာနက်ဆိုဒ်များသို့ ပထဝီအနေအထားအရ၎င်းတို့၏ပံ့ပိုးသူများသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏နိုင်ငံများ၏ဥပဒေများကပိတ်ဆို့ထားနိုင်သည်။
ထို့အပြင်အချို့ပံ့ပိုးပေး «VPNs» ကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြင့်၎င်းတို့တွင်ကွဲပြားခြားနားသောဆာဗာရှည်စာရင်းရှိသည် «anchos de bandas» ရရှိနိုင် ၎င်းသည်၎င်းတို့လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးကိုပေးနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်များ, သူတို့များသောအားဖြင့်များစွာသောနေရာများအတွက်ယနေ့တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်; အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖွဲ့အစည်းကြီးများမှသည်မည်သည့်အများပြည်သူဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကအခြေခံအဆောက်အ ဦး ကိုမဆိုဝေးလံ။ လုံခြုံသော ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်မည်သူမဆို၏အိမ်သို့ရောက်ရှိသည်။
1 ကျွန်ုပ်၏လိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံး VPN ကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
1.1 ယုံကြည်မှုနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ခုကို ဦး စားပေး
ကျွန်ုပ်၏လိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံး VPN ကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
သော်လည်း လူမရှိ «VPN» စုံလင်သောသောကြောင့် အားလုံးမှာအနည်းဆုံးကန့်သတ်ချက်အချို့ရှိသည်ကွဲပြားခြားနားတဲ့လူတွေအတွက်များသောအားဖြင့်ပိုနည်းတယ်။ အဓိကအချက်ကငါတို့ရဲ့အာမခံနိုင်စွမ်းပဲ «protección y privacidad»။ ထို့ကြောင့်၊ အောက်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အကြံပြုချက်များသို့မဟုတ်ဒြပ်စင်များသည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအသုံးဝင်သောလမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ယုံကြည်မှုနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ခုကို ဦး စားပေး
၏ဝန်ဆောင်မှုကိုအမြဲတမ်း ဦး စားပေးပါ «VPN» ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချရဖြစ်ရန်သင့်အားအာမခံ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရိုးရှင်းသောပထ ၀ ီပိတ်ဆို့ခြင်းပြissueနာသို့မဟုတ်အခြားသူများအတွက်သာအသုံးပြုမည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်သင်၏အချက်အလက်များကိုအလျှော့ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့်
သင်၏ရွေးချယ်မှုကိုရှောင်ပါ «Proveedor de VPN» ရိုးရှင်းသောရှာဖွေမှုများနှင့်ရလဒ်များကိုအခြေခံသည် အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရယူခြင်းသည်အကြိမ်ပေါင်းများစွာခေါ်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအမျိုးအစား၏ထုတ်ကုန်သာဖြစ်သည် «publicidad nativa» အရာကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ် «programas de afiliados» နှင့် VPN ပံ့ပိုးသူများ၏ဘုံတွင်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ကြီးမားသောပြproblemနာဖြစ်သောစီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များ။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဖြစ်ပွားမှုများစွာကိုသတိရပါ «programas de vigilancia masiva» ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိအချို့သောနိုင်ငံများမှအစိုးရများနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်လှမ်းမီနိုင်သောကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများထံမှဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဖော်ပြပါနိုင်ငံများတွင်အခြေပြုထားသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ထိုအစိုးရများမှတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေသက်ဆိုင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးမပြုပါနှင့်, သူတို့ကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းမှကာကွယ်တားဆီးဖို့ «registros ilegales» နှင့်ကိုယ်စားကဥပဒေရေးရာကတိကဝတ် «seguridad nacional» သို့မဟုတ်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။
အထူးဖော်ပြသည့်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ «que no mantienen registros»သို့မဟုတ်ထိုပျက်ကွက်ပါကမည်သည့်မှတ်တမ်းများကိုသိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။ ဝန်ဆောင်မှုများစွာမှ «VPNs» သူတို့ကမှတ်တမ်းများကိုသိမ်းဆည်းထားရန်မဟုတ်ဟုဆိုသော်လည်း၊ အကယ်၍ ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကထိုပံ့ပိုးသူများ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများကိုသင်ကိုယ်တိုင်အတည်ပြုပါ။
အသုံးပြုထားတဲ့ protocols များ: လွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ပရိုတိုကောလ်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့သူတွေကိုပိုနှစ်သက်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုလုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကစစ်ဆေးပြီးတိုးတက်စေနိုင်တယ်။ သဟဇာတဖြစ်သောသို့မဟုတ် OpenVPN ကိုအခြေခံသည့်သူများသည်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီး PPTP သည် privacy အတွက်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။
ကိုယ်ပိုင် DNS နှင့် IPV6: ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် IPV4 သို့မဟုတ် IPV6 DNS ဆာဗာကိုထိန်းသိမ်းထားသည့် VPN ဝန်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ပြီး VPN tunnel မှတဆင့်သာကြည့်ရှုနိုင်သည့် VPN သီးခြား IPv6 လိပ်စာအသစ်တစ်ခုကိုပေးသည်။
အသုံးပြုထားသောစာဝှက်စနစ်: အချက်အလက် encryption နှင့်အားကြီးသောလက်ဆွဲသည့် VPN ဝန်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ပါ။ ပေးထားသော protocol သည်မှန်ကန်သော encryption level ရှိကြောင်းသေချာပါစေ။
ရွေးချယ်ဖို့ အကောင်းဆုံး VPN များစွာသောဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့် အောက်ပါ ၀ ဘ်ဆိုဒ် ၂ ခုကိုတစ်ခုအကြံပြုသည် အင်္ဂလိပ် နှင့်အခြား español ၏ပံ့ပိုးပေးအများအပြားအပေါ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါစေ «VPNs» ရှိပြီးသား ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်နှင့်အကိုက်ညီဆုံးသောအရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သို့အလွယ်တကူကောက်ချက်ချနိုင်သည်၊ Las «VPNs» များစွာသောအရာတို့တွင်ကတည်းကအလွန်အသုံးဝင်ပါသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်နိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏အသွားအလာအချက်အလက်များကိုဖုံးကွယ် «Proveedor de Servicios de Internet (Internet Service Provider - ISP)»; အမြင်ဖြင့်သာထွက်ခွာကာကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုတည်ဆောက်ခဲ့သည် ဆာဗာ «VPN»အခြားဘာမျှမ ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်အားလုံးသည်အဆုံးမှအဆုံးသို့၎င်းမှတစ်ဆင့်ဖြန့်ဝေသောနည်းဖြင့်ရရှိသည် «protección y privacidad».
နှင့်မမေ့မလြော့ပါ, ထိုအမြတ်အစွန်းရရှိရန်aကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ «VPN» ကျွန်ုပ်တို့၏ ISP မှပေးသော IP လိပ်စာမဟုတ်ဘဲ IP လိပ်စာများကိုဖြတ်သန်းသွားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်မှန်သောအထောက်အထားကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်အချိန်မရွေးလုံခြုံစေရန်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး တည်ရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသွားအလာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အစစ်အမှန်တည်နေရာမှလာသည်ကိုမသိသော်လည်း၎င်းမှဖုံးကွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည် ဆာဗာ «VPN».
VPN များအကြောင်းသင်ပိုမိုသိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် ၏ဘာသာရပ်သို့ delve «Tunneling de las VPNs» နှင့် «Protocolos VPN» ထိုကဲ့သို့သောနည်းပညာအတွင်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အနည်းဆုံးတော့ဒီအကြောင်းပြချက်အတွက်အခမဲ့ (သို့) ပွင့်လင်းတဲ့နည်းပညာများကိုပုံမှန်အတိုင်းပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းဟာအမြဲတမ်းကောင်းပါတယ် အသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည် «OpenVPN» ထိုကဲ့သို့သောနည်းပညာနှင့် / သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုသည်တတ်နိုင်သမျှအမြန်နှုန်းနှင့်လုံခြုံရေးအကြားအကောင်းဆုံးဟန်ချက်ကိုပေးသည်။
ထုတ်ဝေမှုကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက၊ «VPN» သင်အသုံးပြုသည်သို့မဟုတ်အကြံပြုသည်နှင့်အဘယ်ကြောင့်?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » VPN: ၎င်းသည်အဘယ်နည်း။ ကျွန်ုပ်၏လိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
LibreOffice 6.2 သည်စီးပွားရေးအတွက်အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ